Mayelana neCensus Bureau yase-US
Ukubala iiNtloko kwaye ke abanye
Kukho abantu abaninzi eUnited States, kwaye akulula ukugcina umkhondo wabo bonke. Kodwa elinye iqumrhu lizama ukwenza oku: i-US Census Bureau.
Ukuqhuba ubalo lwabantu be-Decennial
Yonke iminyaka eyi-10, njengoko kufunwa ngumgaqo-siseko wase-United States, i-Census Bureau iqhuba intloko yabantu bonke base-US kwaye ibabuza imibuzo ukuze bancede bafunde kabanzi malunga nelizwe lonke: ngubani thina, apho siphila khona, ukufumana, bangaphi bethu abashadile okanye abangatshatanga, kwaye baninzi bethu banabantwana, phakathi kwezinye izihloko.
Idatha eqokelelweyo ayiyonto encinci, nokuba. Isetyenziselwa ukwahlula izihlalo kwiCongress, ukusabalalisa uncedo lwe-federal, ukuchaza izithili zomthetho kunye nokuncedisa oomasipala, oorhulumente kunye noorhulumente basekhaya ukucwangcisa ukukhula.
Umsebenzi oMkhulu kunye neNdleko
Ubalo lwabantu besizwe esilandelayo eUnited States luya kuba ngowama-2010, kwaye akuyi kuba yinto engabalulekanga. Kulindeleke ukuba ixabise ngaphezu kwe-R11 billion, kunye ne-1 yezigidi zabasebenzi bexesha eliza kubhaliswa. Ngenjongo yokunyusa ukuqokelela idatha nokusebenza, ubalo lwabantu ngo-2010 luya kuba ngowokuqala ukusebenzisa ii-computer ezigcinwe ngesandla ngesandla se-GPS. Ucwangciso oluqhelekileyo lophando lwe-2010, kuquka ukuhlolwa kwetyala eCalifornia naseNyakatho Carolina, luqala iminyaka emibini ngaphambi kokuba uphando.
Ubalo lwabantu bokuqala base-United States lwenziwa eVirginia ngasekuqaleni kwe-1600, xa iMelika yayisekholoni yaseBrithani. Emva kokuba kubekho ukuzimela, kwafuneka kubalwe ubalo obutsha ukuqinisekisa ukuba ngubani, ngokuqinisekileyo, uqulethe isizwe; okwenzeka ngo-1790, phantsi koNobhala weeNkobe uThomas Jefferson.
Njengoko isizwe sakhula kwaye saguquka, ubalo lwaba lukhulu ngakumbi. Ukuncedisa isicwangciso sokukhula, ukuncedisa ukuqokelela irhafu, ukufunda ngolwaphulo-mthetho kunye neengcambu zayo nokufunda ulwazi oluninzi malunga nobomi babantu, ubalo lwaqala ukubuza imibuzo eninzi yabantu. I-Census Bureau yenziwe isikhungo esigxina ngo-1902 ngesenzo seCongress.
Ukubunjwa kunye neMisebenzi yeCensus Bureau
Kubangama-12,000 abasebenzi abahlala isigxina-kwaye, ngo-2000 kubalo lwabantu, amandla angama-860 000-i-Census Bureau i-headquarters e-Suitland, uMd. Iineofisi zengingqi ezili-12 e-Atlanta, eBoston, Charlotte, NC, Chicago, Dallas, Denver, Detroit , IKansas City, Kan., Los Angeles, eNew York, Philadelphia naseSeattle. I-ofisi ibuye isebenzise isikhungo sokuqhubela phambili eJeffersonville, kwi-Ind., Kunye namaziko okufowunela eHagerstown, uMd., Kunye neTucson, iAriz, kunye ne-computer kwindawo e-Bowie, uMd. I-Bureau iya phantsi kweSebe lezorhwebo kwaye ilawulwa ngumlawuli otyunjwe ngumongameli kwaye uqinisekiswe yiSenate.
I-Census Bureau ayisebenzisi ngokuthe ngqo kwi-federal government, nangona kunjalo. Zonke iziphumo zalo zifumanekayo kwaye zisetyenziswe luluntu, i-academia, abahlaziyi bomgaqo-nkqubo, oorhulumente basekhaya kunye noorhulumente kunye noshishino kunye noshishino. Nangona i-Census Bureau inokubuza imibuzo ebonakala ngathi yodwa-malunga nemali engenayo yomzi, umzekelo, okanye uhlobo lwentsebenziswano yabanye kwindlu-ulwazi oluqokelelwayo lugcinwa liyimfihlo ngumthetho wesigqeba kwaye lisetyenziselwa kuphela iinjongo zokubala.
Ukongeza kokuthatha ubalo lwabantu base-United States yonke iminyaka eyi-10, i-Census Bureau iqhuba olunye uphando ngezihlandlo ngezihlandlo. Ziyahlukahluka kummandla wendawo, udidi lwezoqoqosho, imboni, izindlu nezinye izinto. Amanye amabandla amaninzi asebenzisa olu lwazi abandakanya iSebe leZindlu kunye nophuhliso loMmandla, uLawulo loKhuseleko loLuntu, iZiko leSizwe lezeMpilo zeMatriki kunye neZiko leSizwe loLwazi lwezeMpilo.
Umntu olandelayo we-frederal taker, obizwa ngokuba ngubabhalisi, mhlawumbi akayi kukhonkqoza emnyango wakho kude kube ngo-2010, kodwa xa eyenzayo, khumbula ukuba benza okungaphezu kokubala iintloko.
'Ngaphantsi kwe' I-Movie Review
Isikhokelo sokuqala kwiKorea yaseYorea yeDynasty ephakathi
Indlela iNASA isebenza ngayo ukujonga nokukhusela i-Asteroids Killer
Sika kwi-Car emissions
I-10 ephezulu ye-Soap Operas Yonke ixesha
UMary Baker Eddy